Nepali Rajneeti | डिभोर्स हुँदा महिलाले मनाए उत्सव !! वेडिङ्ग ड्रेसलाई विस्फोट गरि उडाए !!
डिभोर्स हुँदा महिलाले मनाए उत्सव !! वेडिङ्ग ड्रेसलाई विस्फोट गरि उडाए !!
एजेन्सी, १२ वैशाख । अमेरिकाको टेक्सासकी एक महिलाले अनौठो तरिकाले आफ्नो विवाह खतम भएको उत्सव मनाएकी छिन् । उक्त महिलाले आफ्नो वेडिङ्ग ड्रेसमा विस्फोटक पदार्थ भरी आगो लगाई पड्काइ दिएकी छिन् । उक्त विस्फोट २५ किमि पर सम्म महशुस गरिएको थियो ।
४३ वर्षकी किम्वर्ली सैन्टलेवेनले विवाह भएको १४ वर्ष पछि आफ्ना विवाह रद्द गरेकी थिईन । यही मौकामा उनले डिभोर्स पार्टी आयोजना गरेकी थिईन् । उक्त डिभोर्स पार्टीमा केक कात्ने तथा अन्य इभेन्टहरु सँगै वेडिङ्ग डे«सलाई विस्फोट गरि आगो लगाउने पनि इभेन्ट थियो ।
त्यही अनुरुप महिलाले रायफलद्वारा वेडिङ्ग डे«समा फायर गरेकी थिईन, त्यसपछि ठुला विस्फोट भएर आगो लागेको थियो ।
किम्वर्लीको वहिनी कार्लाले वताईन् की ९ नोभेम्वरमा डिभोर्सको प्रकृया पुरा भएको थियो । किम्वर्लीको अनुसार वेडिङ्ग डे«स एक झुठ भएकोले त्यसलाई जनाउने फैसला गरेकी थिईन् । उक्त अवसरमा किम्वर्लीको पिता र कार्लाको पनि त्यही थिए । उनिहरुले डिभोर्स सेलिव्रेट गर्ने यो एउटा सानदार तरिका हो भनेका छन् ।
अमेरिकाको टेक्सासकी एक महिलाले अनौठो तरिकाले आफ्नो विवाह खतम भएको उत्सव मनाएकी छिन् । उक्त महिलाले आफ्नो वेडिङ्ग ड्रेसमा विस्फोटक पदार्थ भरी आगो लगाई पड्काइ दिएकी छिन् । उक्त विस्फोट २५ किमि पर सम्म महशुस गरिएको थियो ।